စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ဘတ်ဂျက်အပေါ်ဥရောပ၌ခရီးသွားလာစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်! သို့သျောလညျး, ဒါကြောင့်အမြော်အမြင်ရှိရှိသင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်ဖို့နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်သည်သင်၏သုတသေနပွုအဖြစ်ဖြစ်နိုင်သောင်. ဒါဟာသင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ညာဘက် mode ကိုယူပြီးသို့မဟုတ်စျေးသက်သာနေရာများရွေးချယ်ရာတွင်အားဖြင့်ကယ်တင်နိုင်သည်ဘယ်လောက်သင်အံ့သြသွားစေခြင်းငှါ. ယုံကြည်ကိုးစားပါ…
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ အကောင်းဆုံးဥရောပစားသောက်ဆိုင် Michelin လမ်းညွှန်ဥရောပတစ်ဝှမ်းရထားခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်ရန်အကြီးအက start ကမ်းလှမ်း. Michelin လမ်းညွှန်သည်ဥရောပခရီးသွားများအတွက်စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ဟိုတယ်များကိုရွေးချယ်ပေးသည် 38 ဥရောပမြို့ကြီးများ. အသစ်သုံးမျိုးမြို့ကြီးများဤဆက်ပြောသည်ပြီ 2019 ထုတ်ဝေ: Zagreb…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ လူတိုင်းဟာကွဲပြားခြားနားခရီးသွားလာဆကျဆံ. တချို့ကအခြားအဆုံးအပေါ်အချို့သောရုံကြောင့်ရွယ်တူချင်းဖိအားသို့မဟုတ်မိသားစုဖိအားသွားလာနေစဉ်ခရီးသွားများထံမှလာသည်ဟုအတွေ့အကြုံကိုခံစား. မည်သို့ပင်အကြောင်းပြချက်ကနယ်လှည့်မှကြွလာသောအခါ, again there are different ways of how people like to plan…
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ Dancing နဂါး, ကြံ့, နှင့်ဝက်ပျံ. ဟုတ်ကဲ့, ဝက်! အဆိုပါဝက်၏တစ်နှစ်တာအခမ်းအနားကျင်းပ, ဥရောပတိုက်တွင်တရုတ်နှစ်သစ်ကူးဆင်နွှဲ! တရုတ်နှစ်သစ်ကူး, ထို့အပြင်နွေဦးပွဲတော်သို့မဟုတ် Lunar New Year အဖြစ်လူသိများ, တရုတ်ပြက္ခဒိန်မှာအရေးအပါဆုံးအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအထူးပဲ…